Galmudug oo War kasoo saartay dagaalka ka dhacay Gobolka Galgaduud - Awdinle Online
Galmudug oo War kasoo saartay dagaalka ka dhacay Gobolka Galgaduud
Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug ayaa faah faahin ka bixisay dagaalka degaano ka tirsan gobolka Galgaduud ku dhex-maray Ciidamada Dowladda iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay Deegaanka Cada-xaar oo dhanka Koofur kaga beegan deegaanka bulacle ee gobolka Galgaduud, kaddib markii Ciidamada Dowladda gaar ahaan qeybta 21aad ee ka howlgalla degaannada Galmudug ay weerareen fariisimo ay halkaasi ku leeyihiin Al-Shabaab.
War kasoo baxay Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalku ka dambeeyey qorshe la diyaarinayey oo Shabaab looga saarayao degaannada Gobolka Galgaduud, isla markaana la sii wadi doono inta Al-Shabaab laga saarayo degaannadaas.
Deegaanada Jihada Bari ka xiga Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa la sheegay in Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, kuwaas oo mararka qaar weerar hoobiyeyaal ah ku qaada Garoonka Diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle & Cali Guudlaawe?
Next articleXOG: Heshiis laga gaaray doodii ka taagneed dhismaha HirShabeelle